ဘယ်လောက်စားစားဝမလာအောင် ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ - Cele Gabar
ဘယ်လောက်စားစားဝမလာအောင် ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ
အနုပညာလောကမှာ အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အေးမြတ်သူကတော့ ပွင့်လင်းပြီးဖော်ရွေတဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရသူပါ။ အပျိုကြီးမမအေးမြတ်သူကတော့ နုပျိုတဲ့အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရင်ဖိုစရာကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူကတော့ ဘယ်လောက်စားစားဝမလာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို ပြောပြလာတာပါ။
အေးမြတ်သူကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဒီရက်ပိုင်း… မမမြတ်လေး…live တွေမပြောဖြစ်…. ပုံတွေမတင်ဖြစ်ရသော….. အဓိကအကြောင်းအရင်း…..ညအချိန်မတော် စားချင်တာတွေ စားနိုင်ရေး…ဘယ်လောက်စားစားဝမလာအောင် ကြိုးစားနေရပုံ …အမျိုးသား…/ အမျိုးသမီး.. မခွဲခြားဘဲ…..လူသားတိုင်း ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်မှု့….. လိုအပ်တယ်ရှင့်…နေထိုင်မှု့ ပုံစံအသစ်မှာ….. လူတိုင်းကျန်းမာနေဖို့ ကြံ့ခိုင်နေဖို့ က အဓိက ဦးစားပေးဖြစ်သွားပါပြီ နော်…ချစ်ရသူတွေအားလုံး…. စိတ်ချမ်းသာ….ကိုယ်ကျန်းမာပါစေရှင့်ချစ်ရသူတွေအတွက် အမြင်မတော်တဲ့ ပုံစံတွေဖြစ်နေမယ်ဆို… ကျန်းမာရေးအမြင်လေးနဲ့ မြင်ပေးပါနော်” ရေးသားထားတာပါ။
အေးမြတ်သူကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်သလို ဟန်ဆောင်မှုမရှိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း ဘယ်လောက်စားစားမဝအောင် ကြိုးစားနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့အထိအတွေ့နည်းနေတဲ့အကြောင်းကို ပုံတွေနဲ့တကွပြောပြလာခဲ့ပါပြီ။
Previous post နာမည်ကြီး အကယ်ဒမီသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ရိုက်ကူးတော့မယ့် ဒါရိုက်တာဝင်းလွင်ထက်ရဲ့ ” အိမ် ” ရုပ်ရှင်ကားကြီး
Next post ဦးဇင်းကိတ္ထိသာရအတွက် အရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူနဲ့ညီအစ်ကိုများ